स्कुलबाट घर फर्किदा त्यो दिन किन एक्लै फर्किन् भागरथी ? सधै हिड्ने त्यो बाटोमा त्यो दिन के भयो तेस्तो ? आफ्नै दाई र ठुलाबुवाको बयान (भिडियो) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/स्कुलबाट घर फर्किदा त्यो दिन किन एक्लै फर्किन् भागरथी ? सधै हिड्ने त्यो बाटोमा त्यो दिन के भयो तेस्तो ? आफ्नै दाई र ठुलाबुवाको बयान (भिडियो)
‘वेल कम एमसीसी’ भन्दै पनी प्रदर्शन